Mayelana nokuthi yikuphi ubulili nokuthi "ukwenze kanjani", manje uyazi futhi umfundi wesikole esiphakathi. Ithelevishini ne-Intanethi, ngaphandle kwemingcele ethile, inikeze ulwazi olubanzi kunesihloko abazali, ngokuyisisekelo, njengesikole, ekuboneni kuqala kakade abakwenzi lutho ngokuchazwa kanye nomsebenzi wezemfundo. Noma kunjalo, kubonakala sengathi ngisho nomuntu omdala kungenzeka ngezinye izikhathi azibuze ukuthi livelaphi.
Kungani kuyisimo sezithunywa zevangeli?
Ngakho-ke, yini ukuthunywa kwezithunywa zevangeli futhi kungani kuthiwa lokho? Ngokubukeka, kuyothunyelwa kanyekanye nanoma yimuphi umuntu, oqondisisa konke ekuhlakanipheni kothando. Lokhu kuyinto ejwayelekile yezocansi, lapho owesifazane elele emhlane wakhe, imilenze ihlukana, futhi indoda iphezulu. Lo mbhangqwana ubhekane. Isikhundla sisetshenziswe, njengombuso, ngokusondelana kobulili obuhlukile, kodwa kusakazeke kakhulu phakathi kwemibhangqwana yobulili obufanayo.
Uvela kuphi umqondo? Isiphi isikhundla sezithunywa zevangeli, sazi ngaphambi kwesikhathi sobuKristu futhi, empeleni, izithunywa zevangeli ngokwabo - abelusi abashumayela le nkolo phakathi kwabeZizwe. Isintu sesiqalile ukuqoqa kusukela ekuqaleni, kungenjalo bekungeke kube khona. Futhi uma ekuqaleni kwabantu abakuqala kule nqubo balingisa izilwane, khona-ke isiko nobuciko bobulili bathatha isinyathelo ngaphezu kwalokho. Ngokuthuthukiswa komqondo womphakathi, noma kunjalo, indima ebaluleke kakhulu yomuntu isukele emphakathini. Futhi isikhundla "owesifazane ovela ngezansi" sihambisana ngokugcwele nale mbono. Phela, ngabe yisiphi isithunywa sevangeli esivela endaweni yokubuka? Lokhu kufanekisela ukuhanjiswa kwalona wesifazane, ukuzithoba kwakhe okuphelele nokuthembela kumlingani wakhe. Uphezulu, ngaphezu kwawo, ehola yonke inqubo ngokuhambisana nezifiso nezidingo zakhe.
Uma ebuhedeni, emazweni ase-Asia naseMpumalanga, ukwaneliseka kwamukelwa kokubili kumuntu wesifazane nowesifazane, ngakho-ke ubuKristu bubhekwa njengento enengekayo edingekayo kuphela ekuqhutshweni komncintiswano. Owesifazane wayebhekwa njengesitsha sezono, isilingo, ukungcola. Lapho enza umsebenzi we- conjugal, wayala ukuba abe njengodonsa, ngaphandle kokuhamba, evumela lo muntu ukuba enze lokho akuthandayo. Mayelana nokwaneliseka kwakhe kwenkulumo akazange ahambe: ubulili nokuhlangenwe nakho kwakhe okuhle kwaba khona kuphela ngesigamu esiqinile sabantu. Kungenxa yokuthi isikhundla esinjalo sezithunywa zevangeli, hhayi njengesibonelo esicacile sendima enkulu yamadoda phezu kwabesifazane kuyo yonke into - ebubini obuseduze, ezenhlalakahle, ezombusazwe, ezomnotho, ezingokomoya? Yingakho abapristi bafundisa abantu ukuthi lokhu kuwukuphela okusemandleni futhi okulungile kumKristu ohloniphekile. Kodwa-ke, akuzona zodwa - amaGreki namaRoma, amaHindu, amaShayina kanye nabameleli bezinye imiphakathi abayibheka ngokuyinhloko njengendlela yokubonakalisa isikhundla esiphezulu somuntu onamandla onamandla phezu kwesifazane ongaphansi.
Ukubheka kwezikhathi zanamuhla
Ngenhlanhla, isintu sasinda kulolu daba hhayi nje kwezombusazwe, kodwa futhi nobulili. Futhi ukuthunywa kwezithunywa zevangeli kuyeke ukubhekwa njengento engavamile, futhi kuye kwahlala phakathi kwezinye izinqwaba zabanye, kwasungulwa ukujabulela okuhlukahlukene nokugcwele kobudlelwane obuseduze. Isasebenza ngenkuthalo, ngoba isikhundla sinama-pluses amaningi, noma kunjalo, futhi amaminithi. Izinzuzo:
Abalingani babone ubuso bomunye nomunye ngesikhathi somdlalo wezocansi, okwenyusa imizwa futhi kusiza ukuqonda okubili;
Banethuba lokukhathazeka izindebe nezilimi zomuntu ngamunye (ukumanga ezindebe, ubuso, entanyeni, esifubeni), okwandisa izinga lokuzijabulisa;
Owesifazane unethuba lokugqoka, insimbi, ukucindezela umlingani (emuva, amahlombe, izandla, amathanga, i-scrotum), bobabili bangakhulumisana okuthile okuthakazelisayo, okukhuthaza;
Ukuthunyelwa komzimba kukuvumela ukuthi ulale ucansi ngaphansi kwengubo, uma igumbi lipholile.
Isikhundla samaminithi - indoda ithwele isisindo somzimba wakhe ezandleni zakhe, ngakho-ke isheshe sikhathele; Ukunciphisa kwamakhanda omama; Ukugqugquzela okungathí sina kwendawo eyinhloko yezinsikazi eziyingozi; Ezinye izinkinga ezihlobene nokuzikhethela kwesakhiwo sezinhlangano zomlingani.
Kodwa ukuthunywa kwezithunywa zevangeli (isithombe esitholakala kulesi sihloko) kwenziwa ngezindlela eziningana: owesifazane angaphonsa imilenze yakhe emuva komngane wakhe osemncane, ehlinzeka ukungena okujulile; Ngaphansi kwesiqhwa sakhe, ungabeka i-pad encane noma i-cushion, ukuze i-pelvis ikhishwe kancane (ngenhloso efanayo). Uma owesifazane elele emaphethelweni, futhi umlingani uyithatha, yenza inqubo ibe lula kuye, futhi inikeze inkululeko enkulu yokusebenza ngokuphathelene nalona wesifazane.
Kungakhathaliseki ukuthi uhlanganyela kanjani ocansini, khumbula umthetho oyinhloko: ayikho into enqatshelwe ekusondeleni, ukuze nje kube mnandi kuzo zombili. Inkululeko nokudala kubalulekile kunoma yikuphi ubuciko, kuhlanganise nobuciko bobulili.